‘नयाँ एमाले’ मा केपी ओली र महेश बस्नेतका फ्यान ! के ओलीले दर्ता गर्न लगाएका होलान ? – Sudarshan Khabar
‘नयाँ एमाले’ मा केपी ओली र महेश बस्नेतका फ्यान ! के ओलीले दर्ता गर्न लगाएका होलान ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने व्यक्तिको सूचीमा सांसद महेश बस्नेतसँग निकट व्यक्तिहरु रहेको खुलेको छ ।
युवा संघका पूर्वनेता बस्नेतका हातबाट टीका थापेका र केपी ओलीसँगै तस्वीर खिचेका व्यक्तिको नामसमेत नयाँ एमालेको सूचीमा छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदनमा प्रदेश २ का सचिवका रुपमा रौतहट घर भई भक्तपुर बस्ने जयराम राउतको नाम छ ।
उनी महेश बस्नेतका कार्यकर्ता हुन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा ‘आई एम विथ महेश बस्नेत’ भनेर तस्वीर राखेका छन् । साथै उनले महेश र केपी ओलीसँग तस्वीर पनि खिचाएको देखिन्छ ।
नयाँ एमालेकी उपाध्यक्ष भगवतीले लेखेकी छिन्, नयाँ पार्टी दर्ताकै दिन लेखेकी छिन्,‘ कुर्सीको लागि हैन, देशको लागि ओली चाहिन्छ । सत्ताको लागि हैन, देश बचाउन ओली चाहिन्छ । पदको लागि हैन, विकासको लागि ओली चाहिन्छ । भारतीय विस्तारवादलाई तह लगाउन ओली चाहिन्छ । देशको सान मान र इज्जत हाम्रो बा केपी ओली जिन्दाबाद !’
पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेत केपी ओली निकट नेता हुन् । तर, उनका गतिविधिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेलाबखत विवादमा पार्ने गरेको छ । अघिल्लो महिना पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको समेत मिलेमतोमा सांसद बस्नेतले मधेसबाट समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई गाडीमा हालेर काठमाडौं ल्याएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो ।
अहिले पनि सांसद बस्नेतसँग निकट रहेका कार्यकर्ताहरुले नै नेकपा एमाले दर्ता गरेर पार्टीभित्रको विवादमा आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेका छन् । केपी ओलीलाई बा भन्ने र सँगै तस्वीर खिचाउनेहरुले नै नेकपा दर्ताका लागि निवेदन दिनुले आशंका जन्माएको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।
नयाँ एमाले दर्ताको सूचीमा आफूले चिनेका दुई-चारजना रहेको सांसद बस्नेतले अनलाइनखबरलाई बताए । तर, आफूसित सल्लाह नभई एमाले दर्ता भएको उनले बताए ।
केपी ओली निकट सांसद बस्नेतले अहिले पार्टीभित्र केही विवाद देखा परे पनि पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्ने वा केपी ओलीलाई हटाइहाल्ने परिस्थिति नआउने दाबीसमेत गरे । उनले यसवीचमा आफूले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि छलफल गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केका ज्याकले फेसबुकमा हालेको एउटा स्टाटस पढ्दा प्रधानमन्त्रीका संगातीहरुको सांस्कृतिक स्तर थाहा हुन्छ ।
याे समाचार हामिले अनलाइन खबरबाट लिएका हाैं ।